ch 13 မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 13 မာကု
13:1 And as he was departing from the temple, တပညျ့တျောတစျခုဟုလြှောကျ, "အရှင်ဘုရား, observe these fine stones and fine structures.”
13:2 နှင့်တုန့်ပြန်, ယရှေုကလညျး: “Do you see all these great buildings? There shall not be left stone upon stone, which is not torn down.”
13:3 And as he sat at the Mount of Olives, opposite the temple, ပတေရုသ, and James, and John, and Andrew questioned him privately.
13:4 “Tell us, သောအခါဤအရာဖြစ်လိမ့်မည်, and what will be the sign when all these things will begin to be fulfilled?"
13:5 ထိုအခါယရှေု, answering, began to say to them: “See to it that no one leads you astray.
13:6 များစွာသောငါ၏နာမအတွက်လာကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကား, ဟုဆို, '' ငါကသူဖြစ်၏,’ and they will lead many astray.
13:7 But when you will have heard of wars and rumors of wars, သငျသညျကွောကျလနျ့မဖြစ်သင့်. For these things must be, but the end is not so soon.
13:8 For nation will rise up against nation, and kingdom over kingdom, and there shall be earthquakes in various places, စာခေါင်းပါးခြင်း. These are but the beginning of the sorrows.
13:9 But see to yourselves. သူတို့ရုံးသို့သင်သည်လွှဲပြောင်းပေးရန်လိမ့်မယ်များအတွက်, and in the synagogues you will be beaten, and you shall stand before governors and kings because of me, asatestimony for them.
13:13 သငျတို့သညျငါ၏နာမကို ထောက်. အားလုံးအားဖြင့်မုန်းကြလိမ့်မည်. But whoever will have persevered unto the end, the same will be saved.
13:14 ထိုအခါ, when you have seen the abomination of desolation, standing where it ought not to be, let the reader understand: then let those who are in Judea flee to the mountains.
13:18 အမှန်ဆိုသည်ကား,, pray that these things may not happen in winter.
13:19 For those days shall have such tribulations as have not been since the beginning of the creation that God founded, ယခုတိုင်အောင်, and shall not be.
13:20 And unless the Lord had shortened the days, no flesh would be saved. ဒါပေမယ့်, for the sake of the elect, whom he has chosen, he has shortened the days.
13:21 ပြီးနောက်, if anyone will have said to you: '' ကြှနျုပျသညျ, here is the Christ. အကယ်, in that place.’ Do not believe it.
13:23 ထို့ကြောင့်, you must take heed. အကယ်, I have foretold all to you.
13:24 သို့သော်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်မှ, နေရောင်မိုက်လိမ့်မည်, နှင့်လသည်သူမ၏ဂုဏ်အသရေကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
13:25 ထိုအကောင်းကင်ကြယ်ကိုဆင်းကျသွားပါလိမ့်မယ်, နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသောတန်ခိုးကိုပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်.
13:26 ပြီးတော့သူတို့လူသားသည်မိုဃ်းတိမ်တို့ကိုပေါ်ရောက်ရှိလာမြင်ရကြလိမ့်မည်, အလွန်ကြီးစွာသောတန်ခိုးနှင့်ဘုန်းအသရေနှင့်အတူ.
13:27 ထိုအခါသူကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်လိမ့်မည်, နှင့်သူ၏ရွေးကောက်တော် စုဝေး., လေးမျက်နှာတို့မှ, မြေ၏ကန့်သတ်ထဲကနေ, ကောင်းကင်ဘုံ၏ကန့်သတ်ထားရန်.
13:28 အခုတော့သင်္ဘောသဖန်းပင်မှအသီးပုံဥပမာကိုပိုင်းခြားသိမြင်. ယင်း၏ဌာနခှဲအနူးညံ့ဖြစ်လာသည်နှင့်သစ်ရွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သိရသည်လာတဲ့အခါ, သငျသညျနွေရာသီကအရမ်းနီးသည်ကိုသင်တို့သိရ.
13:29 ဒါကြောင့်လည်း, သငျသညျမွငျပါပွီမည်သည့်အခါဤအရာတို့ကိုဖြစ်ပျက်, အလွန်နီးသည်ကိုသင်တို့သိရ, လူသားသည်တံခါးဝတိုင်အောင်.
13:30 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ဒီအနွယ်ကွယ်ပျောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း, ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုဖြစ်ပျက်မှီတိုငျအောငျ.
13:31 ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်ရကြလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်မဟုတ်.
13:32 သို့သော်ထိုနေ့ရက်၌သို့မဟုတ်တစ်နာရီရည်, ဘယ်သူမှမသိဘူး, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူကောင်းကင်တမန်ကိုလည်းမ, မသားတော်သည်, ဒါပေမယ့်ကိုသာအဘခမည်းတော်.
13:33 Take heed, နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်, and pray. For you do not know when the time may be.
13:35 ထို့ကြောင့်, နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်, for you do not know when the lord of the house may arrive: ညနေပိုင်းတွင်, or in the middle of the night, or at first light, or in the morning.
13:36 ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, when he will have arrived unexpectedly, he may find you sleeping.